Burkina Faso, dad badan ayaa rajeynaya in maxkamadaynta dilkii Sankara ay banaanka soo dhigi doonto wixii dhacay
Monday October 11, 2021 - 09:22:20 in News by Xaaji Faysal
Maxkamadeynta dadka la sheegay inay ka dambeeyeen dilka, oo uu ku jiro saaxiibkiisii ​​hore Blaise
Afar iyo toban nin, oo uu ku jiro madaxweynihii hore, ayaa lagu maxkamadeyn doonaa Burkina Faso dilkii 1987-kii loo geystay Thomas Sankara, hoggaamiyihii kacaanka ee dalkaa, isla markaana ahaa halyeygii Afrika. Meel u dhow goobtii lagu xusayay Thomas Sankara, oo lagu dilay 34 sano ka hor, dadka wax ku iibiya waddooyinka iyo booqdayaasha ayaa sheegaya inay filayaan in maxkamaddu "ay cadayn doonto dilkiisa.
Thomas Sankara oo loogu magac daray Che Guevara-hii Afrika, wuxuu doonayey in uu "maskaxda ka xorooyo” Burkina Faso iyo guud ahaan qaaradda, laakiin riyadiisii ​​kacaanimada ahayd ayaa soo gaabisay cimrigiisii markii lagu dilay afgambigii 1987 kadib afar sano oo uu xukunka hayay.
Maxkamadeynta dadka la sheegay inay ka dambeeyeen dilka, oo uu ku jiro saaxiibkiisii ​​hore Blaise Compaore oo isagu la wareegey xilka madaxweynenimo xukunkana hayay 27 sano, ayaa Isniinta ka furmaya caasimadda Ouagadougou.
In kasta oo uu muddo kooban xukunka hayay, Sankara misna waxay dad badani u hayaan xurmo weyn.
Intii lagu guda jiray mudaaharaadadyo ballaadhan oo lagu afgembiyay Compaore sannadkii 2014, dhallinyaradu waxay wateen sawirada Sankara oo qiimahoodu kor u kacay in kastoo qaar badan oo ka mid ahi aysan xitaa dhalan intii uu hoggaaminayey dalaka burkino faso.
"Sankara waa falsafad dhan, hab fikir iyo ahaansho, hab nololeed. Sankara waa sharafta Afrika,” ayuu yiri macallin dugsiga sare ee Serge Ouedraogo wax ka dhigaa.
"Maanta, waxaan dhihi karnaa Sankara wuxuu u taagan yahay jihaynta loogu talagalay dadka Burkina Faso.
Wuxuu ku dhashay 21-kii December, 1949-kii Yako oo ku taal woqooyiga saboolka, dalka aan lahayn bad, Sankara wuxuu ku soo barbaaray qoys Masiixi ah, aabbihiisna waa ruug-caddaa ciidan. Wuxuu ahaa 12 jir markii wadanku xornimada ka qaatay Faransiiska.
Markii uu dugsiga sare ku dhameystay Ouagadougou, wuxuu tababar ciidan ku soo qaatay dalka dibadiisa. Wuxuu Madagascar u joogay kacdoonkii 1972-kii kaas oo lagu afgambiyay Madaxweyne Philibert Tsiranana, oo loo filay cadaw inuu ahaa maadaama uu la soo shaqeeyey gumeystihii hore ee Faransiiska.
Ku soo noqoshada dalkiisa 1973, Sankara waxaa loo xilsaaray inuu tababaro dhallinyarada ciidanka qorta, wuxuuna ka qayb qaatay dagaal xuduuddeedkii Mali 1974-1975.
Inqilaabkii dhacay 1980-kii, hoggaamiyihii cusbaa, Korneyl Saye Zerbo, wuxuu Sankara u magacaabay xog-hayaha warfaafinta. Laakiin aragtida askariga xagjirka ah ayaa ku kaliftay inuu isaga tago dowladda sanad iyo badh kadib.
Sankara waxaa loo magacaabay ra’iisul wasaare bishii Janaayo 1983 ka dib afgambi kale oo milateri, kaas oo horseeday halgan awoodeed oo dhexmaray ciidanka.
Waxaa la xidhay bishii Maajo 1983 laakiin markale ayaa laga dhigay madaxweyne bishii Ogosto ka dib afgambi kale oo dhacay kaa oo uu hogaaminayey saaxiibkiis Compaore.
Isaga oo 33 jir ah, Sankara wuxuu astaan ​​u ahaa taageerayaasha dhallinyarada Afrika iyo daacadnimada.
Wuxuu ka beddelay magacii waddankii xilligii gumeysiga oo la odhan jirey Upper Volta wuxuuna u beddelay Burkina Faso-"dhulkii ragga daacada ah”.
Wuxuu ka guuray qasri madaxtooyo aad u qurux badan isaga iyo xaaskiisa iyo laba wiil oo uu dhalay iyo gitaarkiisii wuxuu ahaa ciyaartoy hufan, sida ay sheegeen dadka la noolaa.
Waxa kale oo uu Renault 5 oo gacan labaad ah, ka dhigay gaadhiga shaqada isagoo diidey baabuurta qaaliga ah.
Sankara wuxuu ahaa caato ciyaartooy ah, had iyo jeer wuxuu ku labisnaa dharka ciidanka, suunkiisa wuxuu jeclaa inuu bistoolad ku xidho bistooladaa oo galkeedu ahaa luul uu siiyay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Il-Sung.
Mudnaan-siinta barnaamijkiisa dib-u-habeynta waxaa ka mid ahaa in la yareeyo baaxadda shaqaalaha rayidka ah, hagaajinta daryeelka caafimaadka, akhris-qorista dalka oo dhan, isku-filnaansho cunto, tallaabooyin lagu caawinayo beeraleyda saboolka ah, ololaha tallaalka iyo dhisidda farmasiyada tuulooyinka.
Wuxuu mamnuucay gudniinka fircooniga ah iyo guurka khasabka ah, iyo tallaabooyin kale oo lagu hormarinayo xuquuqda haweenka, oo uu gacan bir ah ku qabtay.
Dadweynaha waxaa kormeeray Guddiyada Difaaca Kacaanka waxaana fasaxay Maxkamadda Caanka ah ee Kacaanka, taas oo ka soo horjeesatay ugaasyada dhaqanka iyo kuwa kale ee xoolaha iyo awooda haysta.
"Waa inaan maankeenna ka xorownaa,” ayuu ku dhawaaqay.
Si kastaba ha ahaatee wuxuu bilaabay inuu caburiyo ururada shaqaalaha iyo mucaaradka siyaasadeed, isagoo jebiyey shaqo joojintii macalimiinta isagoo ceydhiyey macalimiintii ka qayb noqotay.
Sankara ayaa sidoo kale ku boorriyay Afrika inay diido inay bixiso deymaha ay ku leeyihiin waddamada reer Galbeedku wuxuuna ka hadlay Qaramada Midoobay si uu u cambaareeyo dagaallada "boqortooyooyinka”, midab kala sooca iyo saboolnimada. Wuxuu kaloo difaacay xaqa ay Falastiiniyiintu u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan.
Xiriirka Faransiiska iyo dhowr dal oo deriska ah, oo ay ku jiraan Felix Houphouet Boigny Ivory Coast iyo Gnassingbe Eyadema’s Togo, ayaa xumaaday.
Dhanka kale waxaa loo tixgeliyey inuu aad ugu dhow yahay Moamer Kadhafi Libya iyo Jerry Rawlings ‘Ghana.
Sankara wuxuu xitaa Francois Mitterrand siiyey cashar ku saabsan xuquuqda aadanaha 1986 -kii kadib markii madaxweynaha Faransiisku uu Paris ku qaabilay Pieter Botha, oo ahaa hoggaamiyaha nidaamkii midab-takoorka Koonfur Afrika.
"Wuxuu ka sii gudbay intii loo baahnaa fikradayada,” Mitterrand socialist ayaa faallo ka bixiyay.
Oktoobar 15, 1987, markii loogu yeedhay kalfadhi aan caadi ahayn oo golaha wasiirrada ah, Sankara waxaa diley askar inqilaab wadey oo ka socotey saaxiibkiis Compaore oo xukunka ku haystey. Wuxuu jiray markii uu dhintay 37 sano oo kaliya.